दु:खद खबर ! कुखुरामा देखियो सं’क्रमण ; धमाधम मर्न थाले – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/दु:खद खबर ! कुखुरामा देखियो सं’क्रमण ; धमाधम मर्न थाले
दु:खद खबर ! कुखुरामा देखियो सं’क्रमण ; धमाधम मर्न थाले
कुखुरामा एच नाइन भा’इरस देखिएपछि यहाँका किसानले पालेका कुखुरा धमाधम मर्न थालेका छन् । भरतपुर महानगरपालिका ६ केशरबागका किसान खेमराज पाठकले पालेका ५ हजार बढी लेयर्स जातका कुखुरा म’रेका हुन् । ती म’रेका कुखुरालाई सोमबार खाल्डो खनेर गाडिएको छ । केन्द्रीय पशुपंक्षी रो’ग अन्वेषण प्रयोगशालामा गरिएको पिसिआर परीक्षणमा एच नाइन भाइरस पुष्टि भएको थियो ।
यसपछि म’रेका कुखुरालाई गा’ड्ने काम गरिएको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र भरतपुरका प्रमुख डा दयाराम चापागाईले जानकारी दिए ।
“काठमाडौँमा परीक्षण गर्दा एच नाइन देखियो, बर्ड फ्लु नदेखिएकाले म’रेका कुखुरालाई व्यवस्थापन मात्रै गरेका छौं, नयाँलाई मा’रेका छैनौं ” उनले भने ।
त्यस्तै,प्रभु बैंक लिमिटेडले आफ्ना ग्राहकहरुलाई डिजिटल भुक्तानी सुविधा प्रदान गर्न खल्ती डिजिटल वालेटसँग सम्झौता गरेको छ। प्रभु बैंकका प्रमुख संचालन अधिकृत रश्मि पन्त र खल्तीका निर्देशक अमित अग्रवालले काठमाडौंको बबरमहल स्थित बैंकको प्रधान कार्यालयमा आयोजित समारोहमा यस सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे।
घरभाडा र बैंक ब्याज मिनाहाको माग गर्दै व्यवसायी उ’त्रिए आ’न्दोलनमा !
कतारमा आइपुग्यो कोरोना विरुद्धको खोप, भोलिदेखि लगाउन सुरु गरिने